Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Mudane Cabdiraxmaan Cirro iyo masuuliyiinta wehelinaya ayaa magaalada Ceerigaabo kulan kula qaatay Musharraxiinta Xisbiga ee Degmada Ceerigaabo.
Saturday May 22, 2021 - 13:54:33
Kulanka ayaa daarna dardaaran iyo dardar gelin ku aaddan doorashada foodda inagu soo haysa iyo hawlaha Ololaha ee ka soo horeeya.
27/09/2021 - 09:42:21
Xoghayaha Arrimaha Bulshada ee Xisbiga WADDANI Mudane Maxamed Sidiiq Dhamme ayaa soo bandhigay caqabadaha hor taaggan qaybta cusub ee kelyo sifaynta ee cisbitaalka guud ee Hargeysa .
26/09/2021 - 09:03:29
Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, ehelada iyo asxaabta uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Maxamed Nuur Cali.
25/09/2021 - 09:15:54
Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada, iyo ummadda Somaliland ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Odey Marxuum Maxamed Cabdi Arabay oo ku geeriyooday Caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
22/09/2021 - 11:40:21
16/09/2021 - 14:59:58